सातामा दुईपटक हल पुग्छु | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← ‘लास्ट नाइटमा लास्ट किस’
बाठा र हक्की बाबुराम →
यहाँ केही निर्देशक, नायिका आफू फिल्म बनाउँछन्, खेल्छन् तर, अरूको फिल्म हेर्न हल जाँदैनन् । बरु अरू फिल्ममेकरको कुरा काटेर बस्छन् पुजना प्रधान, अभिनेतृ पछिल्लोपटक कहिले हल जानुभयो ? मैले अभिनय गरेको पछिल्लो फिल्म ‘श्रीमान्’ रिलिजको क्रममा पूर्व-पश्चिमका धेरै हलमा पुगेँ । आफ्नै फिल्म दर्शकसँग बसेर हेरेँ । त्यसपछि ‘कसले चोर्‍यो मेरो मन’को पि्रमियरमा गएँ गोपीकृष्ण हलमा ।
आजभोलि फिल्महल कत्तिको जानुहुन्छ ?
हल पुगिरहेकी हुन्छु । म बढी हल पुग्ने कारण नेपाली फिल्म हेर्ने लोभले नै हो । कुनै पनि नेपाली फिल्म हेर्न छुटाउँदिनँ । जति व्यस्तताले छोपे पनि म नेपाली फिल्म हेर्न समय मिलाउँछु । साताको दुईपटक हल पुगेकै हुन्छु । हिन्दी फिल्म हेर्नचाहिँ सकेसम्म हल जान्नँ । घरमै सिडी ल्याएर हेर्छु ।
तपाईंलाई कस्ता फिल्मले हलसम्म तान्छ ?
मलाइर्ं सेन्टिमेन्टल फिल्म मनपर्छ । अनि कुनै असल मान्छेको जीवनमाथि बनाइएको फिल्म पनि मनपर्छ । त्यस्ता फिल्म जुनै भाषाको भए पनि म हेर्न छुटाउँदिनँ । खासमा पत्रपत्रिकामा आउने फिल्म-समीक्षा, कथावस्तु र पात्रका कुराले तान्यो भने पनि हल गएरै फिल्म हेर्छु । जस्तासुकै नेपाली फिल्मले पनि हलसम्म तान्छन्, ’cause नेपाली फिल्मचाहिँ पैसा तिरेरै हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यहाँ कति निर्देशक, नायिका छन् जो आफू फिल्म बनाउँछन्, खेल्छन् तर, अरूको फिल्म हेर्न हल जाँदैनन् । बरु अरू फिल्ममेकरको कुरा काटेर बस्छन् । मलाई त्यस्ता मान्छे ण्मन पर्दैन । खासमा मलाई कुनै सन्देश बोकेका फिल्म मन पर्छन् । हिन्दी फिल्म ‘तारे जमिन पर’ असाध्यै मन परेको फिल्म हो । बच्चाको मनोविज्ञान र उनीहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, त्यसमा देखाइएको छ ।
पहिलोपटक हल छिरेको अनुभव कस्तो छ ?
म लमजुङमा जन्मे पनि काठमाडौंमै हुर्किएँ । ममीले म सानै छँदा हात समातेर फिल्म हेर्न हल लैजानुहुन्थ्यो । ममीको हात समातेर हल पुगेको साह्रै सम्झना आउँछ । तर, पहिलोपटक कहाँ र कहिले हल पुगेँ ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ । यति याद छ, ६ कक्षा पढ्दा म स्कुलबाट भागेर साथीहरूसँग फिल्म हेर्न ‘विश्वज्योति’ हल पुगेकी थिएँ । र, नायक राजेश हमालको फिल्म ‘एक नम्बरको पाखे’ हेेरेकी थिएँ ।
पछिल्लोपटक कुन फिल्म हेरेर रुनुभयो ?
मेरो आफ्नै फिल्म ‘श्रीमान्’ । साथीहरूसँग हेरेकी थिएँ, फिल्मकी मेरी छोरीको रोलले रुवाएको थियो ।
युवा उमेरमा हलमा कत्तिको जानुभयो ?
म पहिलेदेखि नै आफ्नो एक्टिङ र पढाइलाई पनि राम्रो बनाउन चाहन्थेँ । म नायिका बन्नु पहिले हलमा उति धेरै जान पाउँदिनथेँ । र, हिन्दी फिल्म बजारमा सस्तो र सहजै पाइन्थे । त्यतिवेलाका हिन्दी र अंग्रेजी फिल्म निकै हेरेँ । हलमा अहिले धेरै गइन्छ, पहिले खासै गइन्नथ्यो ।
हलमा बढी हेर्नुहुन्छ कि घरमा ?
पहिले त घरमा बढी हेरेँ, हलमा पनि कम गइन्थ्यो । हिरोइन भएपछिचाहिँ हल जाने क्रम एक्कासि बढ्यो । नेपाली फिल्म त लगभग छुटाउँदिनँ । अहिले साथीहरूसँग र वेलावेला आमासँग पनि फिल्म हेर्न हल गइन्छ । फिल्म हेर्दा छेवैमा आफ्नो ‘कोही’ भइदियो भने निकै रमाइलो लाग्छ ।
हलमा र घरमा के फरक छ ?
स्वाभाविक रूपमा फरक हुन्छ घर र हलमा । हलमा ठूलो पर्दा हुन्छ, घरमा सानो टिभी वा ल्यापटपमा हेर्नुपर्छ । सिडी कोरिएको रहेछ भने क्यारक्यार गरिरहन्छ, बीचबीचमा रोकिन्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ घरमा फिल्म हेर्दा साह्रै रिस उठ्छ । हलमा फिल्मको कथा सर्सर्ती बगिरहेको हुन्छ, साउन्ड पनि स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, त्यसैले फिल्म हेर्न त हलमै मजा ।
विदेशका हलहरूमा कत्तिको फिल्म हेर्नुभएको छ ?
हेरेकी छु । अमेरिकाको हलमै गएर हेरेँ । अमेरिकाको टेक्सासमा ‘बिग सिनेमा’ भन्ने हलमा आफैं नायिका भएको फिल्म ‘द निर्मला’ हेरेकी थिएँ । विदेशीसँग आफ्नै फिल्म हेर्न पाउँदा निकै खुसी लाग्यो ।
नेपाल र विदेशका हलमा के फरक पाउनुभयो ?
धेरै फरक छ नि । उताका हलमा नेपाली हलभन्दा पर्दा नै ठूलो हुन्छ । वातावरण नै निकै मनोरञ्जक हुन्छ । फिल्म देखाउने पर्दादेखि बस्ने सिट पनि अत्याधुनिक हुँदारहेछन् । विदेशमा ‘थ्री डी’ क्वालिटीको हुन्छ । नेपालमा पनि यस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । काठमाडौंमा पनि केही हल विदेशकै स्ट्यान्डर्डका छन् ।